Manchester United iyo Manchester City oo ku dagaalamaya saxiixa Weeraryahan ka tirsan kooxda Ajax – Gool FM
(Manchester) 21 Abriil 2019. Sida wararku ay sheegayaan labada kooxood ee ka dhisan Magaalada Manchester ee Man United iyo Man City ayaa la soo warinayaa inay ku dagaalamayaan saxiixa weeraryahan ka tirsan kooxda Ajax.
Manchester United iyo Manchester City ayaa la soo warinayaa inay waji ka waji isaga hor’imaan doonaan saxiixa weeraryahanka kooxda Ajax ee Hakim Ziyech suuqa kala iibsiga xiddigahan ee xagaagan.
Hakim Ziyech ayaa bandhig aan caadi ahayn u sameeyey kooxda Ajax inta lagu guda jiro xilli ciyaareedkan 2018-19, isagoo dhaliyey 19 gool, waxaana uu dhiibay ama caawiyey 20 gool oo kale 42 kulan oo uu ciyaaray tartammada oo dhan.
26-sano jirkaan ayaa kooxdiisa Ajax ka caawiyey inay gaaraan afar dhammaadka Champions League, halka sidoo kale kooxda reer Holland ay hoggaanka u hayso horyaalka Eredivisie ee dalkaasi.
Wargeyska The Sun ayaa warinaya in Ziyech uu bartilmaameed sare u yahay Manchester City, laakiin Manchester United ayaa sidoo kale aad u doonaysa xiddigan 23-ka kulan u ciyaaray xulka qaranka Morocco, kaasoo la filayo inay saxiixiisa ku dagaalamaan labadan kooxood marka dib loo furo suuqa iibka xiddigaha.
Weeraryahankan ayaa la rumeysan yahay in heshiiskiisa lagu burburin karo adduun dhan 25 milyan oo gini, waxaana qandaraaskiisa haatan uu ku eg yahay bisha June ee sanadka 2021-ka.
Xiddigii hore ee Arsenal, Edu oo dib ugu soo laabanaya kooxda ka dhisan Emirates… (Muxuu yahay doorka uu ka qaban doono?)